सरकारले नै कानुन विपरीत भएको टुटल र पठाओलाई बन्द गर्नुपर्छ – ट्याक्सी व्यवसायी – Khabar Patrika Np
सरकारले नै कानुन विपरीत भएको टुटल र पठाओलाई बन्द गर्नुपर्छ – ट्याक्सी व्यवसायी
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र १५, २०७७ समय: ९:०१:०९
नेपालमा ट्याक्सीले यात्रु ठग्ने विषय नयाँ होइन । मिटरमा चल्न नमान्ने र मनपरी भाडा असुल्ने ट्याक्सी चालकहरूको प्रवृत्तिबाट यात्रुहरूलाई मुक्ति दिएका छन् राइड सेयरिङ एप पठाओ र टुटलले ।
ट्याक्सीभन्दा निकै सस्तो र सेवा पनि छरितो हुने भएपछि यात्रुहरुमाझ पठाओ र टुटल लोकप्रिय छन् । यसले ट्याक्सी चालकहरूको रोजीरोटी भने संकटमा परेको छ । त्यसैले उनीहरू विभिन्न बहानामा पठाओ-टुटललाई अवरोध गर्दै आएका छन् ।
तीन दिनअघि ट्याक्सी ड्राइभरहरूको एक समूहले पठाओ राइडरमाथि भौतिक आक्रमण गरे । त्यसयता राइड सेयरिङ एपको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल उर्लिएको छ ।
यिनै विषयको सेरोफेरोमा हामीले नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौं ।
ट्याक्सीचालक र पठाओ-टुटलबीच बारम्बार लफडा हुने गर्छ । अस्ति पनि पठाओ राइडरलाई ट्याक्सी चालकले पिटे । किन उनीहरूलाई दखिनसहेको ?
खासमा ट्याक्सी र पठाओबीचको विवाद होइन यो । यो कानुनको पालना गर्ने/नगर्ने कुरा हो । ट्याक्सी कानुनीरुपमा सञ्चालन भएको छ । सरकारले तोकेको भाडादर, राज्यले भने अनुसारको काजपत्र बनाएर ट्याक्सी सडकमा गुडेका छन् । हामीले सरकारलाई कर बुझाएका छौं । तर पठाओ र टुटल भने सरकारको नीति-नियममा हिँडेका छैनन् ।
पठाओ र टुटलले सरकारलाई कर पनि तिरेका छैनन् । उनीहरूको भाडा कसैले पनि तोकेको छैन । आफ्नै मनलाग्दी छ । आफैंले भाडा तोकेर पठाओ र टुटलले ठगी काम गरिरहेका छन् ।
यात्रुहरूचाहिँ पठाओ र टुटलले सस्तोमा यात्रा गराएर खुशी छन् । तपाईं कसरी उनीहरुल ठगे भन्दै हुनुहुन्छ ?
मैले भनेँ नि । उनीहरू आफैंले भाडा तोकेर हिँडेका छन् । जबकी ट्याक्सीलाई सरकारले भाडा तोकेको छ । ट्याक्सीमा मिटर पनि छ । पठाओ र टुटललाई त्यस्तो केही नियम छैन । सरकारको नियम-कानुन त सबैलाई लाग्छ होला नि ।
पठाओ र टुटलको न ट्याक्सीको जस्तो कालो नम्बर छ, न हाम्रो जस्तो मिटरको सिल छ । हाम्रा ट्याक्सी चालकहरूले खुद्रा पैसा नभएर यदाकता २०/५० रुपैयाँ धेरै लिँदा ठगी गर्यो भन्ने हुन्छ । तर पठाओ र टुटलले कानुन नै नमानेर कसैको छत्रछायामा परेर ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् ।
गैरकानुनी काम गरेको भए यो विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा भइहाल्यो नि ?
हामीले रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधन बाइक र स्कुटरले यसरी नियम विपरीत मान्छे बोकेर हिँड्न पाउँदैन भनेर यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था बिभाग र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा पनि धेरैपटक पत्राचार गरिसकेका छौं ।
महासंघले पनि धेरै पटक यो विषयमा राय-सल्लाह दिएको छ । कालो नम्बरप्लेटले के काम गर्ने र रातो नम्बर प्लेटले के काम गर्ने भन्ने त कानुनमा पनि लेखिएको छ । प्राइभेट र सार्वजनिक यातायातालाई कानुन पनि फरक छ । प्राइभेट गाडीले गलत गरे वा मापसे गरेमा १ हजारको चिट काटेर छाड्ने तर ट्याक्सी चालकले मापसे गरे सार्वजनिक मुद्दा चलाउने गरिएको छ ।
कि राज्यले पठाओ र टुटल लगायतलाई ट्याक्सी र सार्वजनिक बसजस्तो गराउनु पर्यो । होइन भने ठगीधन्दा चलाउन दिनु भएन ।
पठाओ र टुटलले कानुनमा नै नभएको काम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सडकमा घर बनाउन त पाइँदैन नि । घर निर्माणका लागि निजी जग्गा चाहियो । टुटल र पठाओले सडकमा नै घर बनाएका छन् । यो सरासर ठगी धन्दा हो । यसलाई जसरी नि रोक्न पर्छ ।
खास ठगीधन्दा त तपाईंहरूले गरिरहनुभएको छ भन्छन् नि उपभोक्ता । मिटरमा हिँड्न नमान्ने, मनलाग्दी पैसा असुल्ने तपाईंहरू होइन ? कि तपाईंहरूले मात्रै ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो ?
सबै ट्याक्सी मिटरमा हिँड्दैन भन्ने हैन । केही मिटरमा नहिँड्ने पनि होलान् । चक्रपथभन्दा २ किलोमिटर बाहिरसम्म जाँदा आपसी सहमतिमा यात्रा गर्ने भन्ने ऐनमा नै व्यवस्था छ ।
तर किन ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् भनेर सरकारले एउटा सानो कारण खोजे हुने थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले पनि सरकारलाई कर तिरेका छन् । ६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर लागू हुन सकेको छैन । सरकारले ट्याक्सीमा ८ वर्षदेखि भाडा समायोजन नगर्ने, पठाओ र टुटलले भने आफैंले भाडा तोकेर हिँड्ने ?
एकातिर तपाईंहरु पठाओ र टुटलको खोइरो खन्ने । अर्कोतिर धेरै ट्याक्सी चालक नै पठाओ र टुटलमा आवद्ध छन् नि ?
हो, पठाओमा हाम्रा केही ट्याक्सी पनि जोडिएका छन् । मिटरमा भन्दा पठाओमा जोडिँदा प्रतिटिप १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै फाइदा आउँछ । भाडा बढी उठ्ने भएर नै उता जोडिएका हुन् । पठाओले २५ प्रतिशत लिने र बाँकी त सबै चालकलाई नै हुने भयो । त्यसैले केही चालक उता गएका हुन् । तर, गैरकानुनी हो भन्ने बुझेपछि फर्किने छन् ।
२ वर्षदेखि सञ्चालन आएको पठाओ र टुटललाई किन अहिले अवरोध ?
पहिले नै पनि केही साथीहरूले बन्द गर्नु पर्छ भनेर मुद्दा हालेका थिए । नेपालमा पैसाको चलखेल धेरै हुन्छ । माथिबाटै सहयोग भएकोले यो सञ्चालन भइरहेको हो ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि यो गलत छ भनेको थियो । पठाओ र टुटललाई समातेका पनि थिए । तर पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै यसलाई नरोक्नु भनेर आदेश आयो ।
गलत कामलाई त माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिले पनि गलत हो भन्नुपर्छ । यो गलत हो । पठाओ र टुटल उनीहरुले नै बुझेर बन्द गर्दा राम्रो ।
ट्याक्सीमा आएका यात्रुलाई हामी लान्छौ भनेर विवाद भइरहेको छ । हामीले मुद्दा हाल्नुभन्दा सरकारले नै कानुन विपरीत भएको टुटल र पठाओलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
उहाँहरूले पनि कालो नम्बर प्लेट हालेर यात्रु बोके हुन्छ । अहिलेको सरकारले बाइकमा कालो नम्बर प्लेट हाल्दिए हुन्छ । बाइक चढ्नेलाई टुटल र पठाओ भनेर रोक्ने गरेका छन् । बाइक किनेर सडकमा हिँड्नसमेत लाज हुने अवस्था आएको छ ।
बाइक चढ्नेलाई हात दिएर यात्रुले ‘म १ सय रुपैयाँ दिन्छु, त्यहाँसम्म पुर्‍याइदेउ न’ भन्ने अवस्था आएको छ । केपी ओलीको सरकारले टुटल र पठाओलाई फरक नम्बर प्लेट हाल्दिनुपर्यो ।
ट्याक्सीले ५ सय रुपैयाँ भाडा लिने ठाउँमा टुटल र पठाओले १ रुपैयाँमा यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन् । जनता उनीहरूको सेवामा खुशी छन् । अब तपाईंहरूले पनि त जनतालाई खुशी पार्न सक्नुपर्यो नि !
यात्रुलाई त जति सस्तोमा हिँड्न पायो त्यति नै राम्रो हो । तर मेरो एउटा गाडीको लगानी ३० लाख छ भने ३० हजारको बाइकसँग तुलना गर्न मिल्दैन । एउटा व्यवसायीलाई मारेर अर्काे व्यवसायलाई लुट्न दिनु भएन । १० वर्षदेखि कर नतिरेका बाइक चलाएर सस्तो लोकप्रियता लिनु भएन ।
तपाईंहरुले भनेको वैज्ञानिक भाडादर चाहिँ कस्तो हो ?
मूल्यवृद्धि अनुसार भाडादार समायोजन गर्नुपर्यो भन्ने हो । वैज्ञानिक भाडादर लागू भयो भने मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः भाडा बड्छ र मूल्य घटेको घटेको छ भने भाडा पनि घट्छ ।
२०६९ सालदेखि ट्याक्सीको भाडा समायोजन भएको छैन । हामीले भाडा बढाइदिनुपर्‍यो भनेको छैन । वैज्ञानिक भाडादर के हो त्यसलाई नै कार्यान्वयन गराए हुन्छ । हामीले धेरैपटक भाडा समायोजनको लागि कुरा उठाइसकेका छौं । तर सरकारले असार र साउनमा कुरा उठाउँदा चाडपर्व आउन लागेको छ, अहिले भाडा समायोजनको कुरा नगर्नुस् भन्छ । तर पछि प्रक्रियामा जादा आर्काे वर्षको चाडपर्व आउँछ ।
वैज्ञानिक भाडादर भनेपछि घट्ने त त्यस्तै हो, सधैं बढ्ने नै त होला नि ?
वैज्ञानिक भाडादरअनुसार भाडा घटेको पनि रेकर्ड छ । हामीले त्यही भएर वैज्ञानिक भाडादर लागू गरौं भनेका हौं ।
तपाईंहरूका माग अरु पनि छन् कि यही मात्रै हो ?
ट्याक्सी चालकका लागि पार्किङको पनि समस्या छ । गाडी रोडमा गुडिरहने त हैन । रोक्नका लागि पार्किङ नै छैन । गाडी सडकमा निस्केपछि रोक्ने ठाउँ कतै छैन । रोडमा गुडीरहेपछि जाम पनि बढ्छ ।
तपाईंहरूले ट्याक्सीलाई किन प्रविधिमैत्री बनाउन सक्नु भएन त ?
हामीले टुटल र पठाओ आउनुभन्दा पहिले नै इडिक्याप भन्ने एपबाट सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरेका थियौं । तर विभागले तपाईंहरू सार्वजनिक यातायातको साधान भएकाले एपबाट सञ्चालन गर्न मिल्दैन भनेपछि हामी पछि हटेका हौं ।